I-LibreCAD - I-Geofumadas
Geographic Information Systems: amavidiyo ezemfundo 30
I-geolocation yangaphakathi cishe cishe konke esikwenzayo, ngokusebenzisa amadivayisi we-elekthronikhi, yenza inkinga ye-GIS idinga ukuphuthuma ukusebenzisa. Iminyaka engu-30 edlule, ukukhuluma ngomxhumanisi, umzila noma imephu kwakuyinkinga evamile. Isetshenziswe kuphela ngabachwepheshe bezintambo noma abavakashi abangenakukwenza ngaphandle ...
I-AutoCAD Imephu Bentley Systems cadastre utshani I-FreeCAD egeomates yami
Ukufundisa CAD / GIS, Geospatial - GIS, kokuqala
Linux has a ithuluzi elisha lwendabuko CAD
Ngokungafani nendawo ye-Geospatial lapho izinhlelo zokusebenza ezivulekile ziphuma ngaphandle kwezinhlelo zokusebenza eziphathelene nezivumelwano, isofthiwe encane kakhulu esiyibonayo i-CAD ngaphandle kwesinyathelo se-LibreCAD esisekuningi okuzosibekela. Nakuba i-Blender iyithuluzi eliqinile kakhulu, i-orientation yalo iwukuba izithombe futhi hhayi ku-CAD esebenze ku-Engineering, ...
I-AutoCAD 2012 I-FreeCAD
I-AutoCAD-AutoDesk, Innovations, IntelliCAD
LibreCAD ekugcineni sizoba CAD khulula
Ngifuna ukuqala ngokucacisa ukuthi akufani ukusho i-CAD yamahhala njenge-CAD yamahhala kodwa kokubili amagama asetshenzisweni lwe-Google evame kakhulu ehlotshaniswa negama le-CAD. Kuye ngohlobo lomsebenzisi, umdwebo oyisisekelo uzocabangela ngokutholakala kwawo ngaphandle kokwenza inkokhelo yelayisense noma isilingo sokuphanga futhi ...
I-AutoCAD-AutoDesk, IntelliCAD, kokuqala
QCad, AutoCAD okunye ye-Linux ne-Mac
Njengoba sazi, AutoCAD ingaqalisa ku-Linux ku Wine noma Citrix, kodwa ngalesi sikhathi ukukhombisa ithuluzi kungaba izindleko isixazululo ongaphakeme ye-Linux, efana Windows ne-Mac. Kuyinto QCad, omunye akhiwa isixazululo RibbonSoft kusukela 1999 futhi okwamanje ifinyelele ukuvuthwa okwanele ...